Gbanwee njikwa Twitter gị n’enweghi ndị na-eso ụzọ gị | Martech Zone
Gbanwee njikwa Twitter gị n’enweghi ndị na-eso ụzọ gị
Thursday, August 24, 2017 Fraịde, Septemba 1, 2017 Douglas Karr
Anyị na-na-arụ ọrụ site na anyị rebranding si Blog Ahịa Blog na Onwuchekwa. Anyị ga-ekekọrịta ọkwa na ọdịnihu otu ihe kpatara anyị ji aga na nchịkọta aha ahụ - mana imirikiti ya gbadoro ụkwụ na iwepu okwu ahụ blog site na mbupute anyi.
Luckily, ọtụtụ n'ime anyị na-elekọta mmadụ akaụntụ na usernames enweghị okwu blog n'ime ha - ma e wezụga otu! Akaụntụ Twitter anyị bụ @mktgtechblog. Nke a bụ nlekọta site na ụbọchị mbụ. Oge obula mmadu juru ihe aha njirimara bu, aghaputara m ikpo ya mktg-tech-blog, megharia ya ugboro ole na ole.
Ebe obu na anyi akwagala na saiti site na marketingtechblog.com chukwuebuka, Achọrọ m Twitter maka aha njirimara nwere okwu ahụ nkata n'ime ya. N’ụzọ dị mwute, akpọrọ ọtụtụ mana enwere m ike ịhụ nke ahụ @IGIHE dị.
Kwụsị, Edebanyela ya… Ma
Nke a bụ ebe imirikiti mmadụ na-emehie. Ha debara aha a aka ọhụrụ na Twitter wee gaa na akaụntụ mbụ ha wee gwa onye ọ bụla ha kwagara. Nsogbu bụ na ọ bụ naanị ntakịrị akụkụ nke ndị na-eso ụzọ ha gara aga na-eme mgbalị ịgbaso akaụntụ ọhụrụ ahụ. Na nke anyị, anyị ga-efu ọtụtụ iri puku ndị ọrụ ma ọ bụrụ na anyị mere nke ahụ.
Etu esi agbanwe njikwa Twitter gị
N'adịghị ka ọtụtụ saịtị, Twitter na-enye gị ohere gbanwee aha njirimara gị! Enwere m ike ịgbanwe @mktgtechblog ka @Igihe na akaụntụ m ma ghara ida nke ọ bụla n'ime ndị na-eso 34,000 anyị anyị rụsiri ọrụ ike iji dọta. Ozugbo enyere aha njirimara ọhụrụ ahụ, anyị debara aha aha ochie anyị ozugbo wee tinye ozi anyị kwagara.
Iji gbanwee njikwa Twitter gị, ịkwesịrị ịnyagharịa na gị Ntọala Page (ọ bụghị peeji nke profaịlụ). E depụtara njikwa gị na mpaghara mbụ. Nwere ike ịmalite dee Twitter ọhụrụ iji hụ ma edebe ya. Ozugbo imelite ya na ihe ịchọrọ, naanị chekwaa ntọala gị. Ugbu a ị nwere gbanwere aka Twitter gị ma tufuo onye na-eso ụzọ ya!
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na - achọ ihe ochie Twitter gị? Ọfọn, nke a bụ akụkụ dị mma - ugbu a deba aha gị ochie Twitter njikwa ọzọ ma tinye ozi iji mee ka ndị mmadụ mara na ị kwagara.
Anyị na-etinye ozi na-esonụ na akaụntụ ochie ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike pịa njikọ na saịtị ọzọ ma ọ bụ chọta akaụntụ ahụ na nsonaazụ ọchụchọ. Thiszọ a, ha ga-amata na anyị kwagara ma soro anyị na akaụntụ emelitere.
Hey - ọ bụrụ na ị nwere ekele maka ndụmọdụ a, jide n'aka na ị ga-eso anyị na Twitter!
Tags: gbanwee njikwa twittergbanwee aha njirimara twittergbanwee aha akaụntụ twitter gịgbanwee njikwa twitter gịgbanwee aha twitter gịotúmartech zoneakwaga twitterTwitternjikwa twitteraha njirimara twitter
Idozi Ọdịnaya Gị nwere ike imebi atụmatụ azụmaahịa gị
LeadPages: Deploy Mara mma, na-anabata ọdịda peeji nke na Nkeji
Sep 5, 2017 na 5: 40 AM
Echere m, nke a siri ike ịhazi aha njirimara na-enweghị atọpụ ndị na-eso ụzọ. Youzọ ị kọwara si enyere gị aka inweta uru site na ya. GỤKWUO: https://goo.gl/1Qrnih